Iintlanzi ezili-10 eziphezulu ze-Rock Stars eziye zacima kwiSiteji
Abaculi abaye bavala i-Stage ne-On-Stage Kwiimiboniso zabo
Abanomdla bamatye abanamandla ngokukhawuleza bafumana ukubambelela kubaphulaphuli abaninzi abawa phantsi kwinqanaba, bawa phantsi, badibene, okanye badibanise nezixhobo zabo. Izingozi zenzeke nakwiimvumi ezilungileyo.
UDave Grohl uhla kwaye aphule umlenze kwi-Gothenburg, eSweden (2015)
UDave Grohl. Kevin Mazur-Getty Izithombe.
Ngelixa iFoo Fighters beqhuba "i-Monkey Wrench" kwikhonsathi yaseGenhenberg, eSweden, iFood Fighters phambi kukaDave Grohl yengozi yokuwa eqaqa emlenzeni wakhe. Ngexa uGrohl egijimele esibhedlele amanye amaFoo Fighters 'aqhubeka nomdlalo wokudlala. UGrohl wagqiba iiyure zokubonisa emva kwesikhwele emlenzeni wakhe. UGrohl ngoku uqhubeka nohambo lweFoo Fighters ehleli kwi-guitar trouser njengoko umlenze wakhe uphulukisa. UGrohl uya kufuneka ukuba ave "musa ukuphuka umlenze" ngaphambi kokuya kwi-lifest for the rest of his life.
Jonga u-Dave Grohl olwaphuka umlenze wehla apha.
I-Aerosmith kaSteven Tyler yawa e-Sturgis, kwi-South Dakota show (2009)
I-Aerosmith kaJoe Perry noSteven Tyler. Ifoto: Vittorio Zunino Celotto-Getty Izithombe
Ngoxa i-Aerosmith yayiqhuba ngokuhlala kwi-Sturgis Motorcycle Rally eMzantsi Dakota ka-2009, umculi uSteven Tyler wawa esecaleni xa eqhuba "Uthando Kwi-Elevator". UTyler wavalelwa entanyeni, emva, kunye nokulimala kwegxalala ekuwa kwelokuba wafunyanwa kuyo.
Jonga uSteven Tyler wehla apha.
I-U2 I-Edge iwela ngaphandle kweVancouver, ebonisa iCanada (2015)
U2 ye-Edge. Joe Hale-Getty Izithombe
Ngoxa ndenza "Ndingasifumananga Nokuba Ndifuna Ngayo" U2 ugqirha I-Edge yayisondele kakhulu kumda weqonga kwaye yawa. Ngenhlanhla wayengenakunqotshwa. I-Edge kufuneka ibuke apho ihamba khona kwisigaba okanye iyakwazi ukuzifumana esibhedlele.
Jonga I-Edge yehla kwinqanaba uze uwele apha.
Usuku lwe-Green Day lukaTrot Cool luya kuphuma umgqomo kwi-Letterman Show (2007)
Usuku oluluhlaza. Dave Hogan-Getty Izithombe.
Emva koMhla woBuhlaza wenza "i-Boulevard ye-Broken Dreams" kwi- Show Soon kunye noDavid Letterman ngo-2007, umculi weTr Cool wawela emgqumeni wenyuka waza walala kwisiteji. I-Tre Cool idonsa iinqununu ekugqibeleni phantse yonke into ebonisa iLate Show ukusebenza kuquka kanye nokwenza i-somersault phezu kweengqungquthela zakhe (jonga apha nge-3:50 mark) kodwa akabonakali ukuba akhathazeke.
Jonga u-Tre Cool wehla apha.
I-B2 ye-U2 iwayeka ngexesha leMiami, iFlorida show (2001)
B2 U2. KMazur-Getty Izithombe
Isiganeko sika-Edge sika-2015 asizange kube ngowokuqala ilungu le-U2 lawa phantsi. Ngethuba lokusebenza kuka-2001 "Kuze kube sekupheleni kweHlabathi" eMiami, umculi we-U2 uBono uhambela ngasemva kwinqanaba. Ngenhlanhla iBono yayingenakonakaliswa kwaye yakwazi ukuqhubeka ingoma.
Jonga i-Bono yehla apha.
Slip Jam's Eddie Vedder kwaye iwa eMilan, eItaly ibonisa (2006)
Eddie Vedder. Mick Hutson Getty Izithombe
Ngoxa uPearl Jam eqhuba ingoma yakhe ethi "Alive" ngexesha lekhonsathi yaseMilan ka-2006, umculi u-Eddie Vedder waphonononga izixhobo zamatye ngelixa eqhuba esiteji. Ingoma yomsindo "ukuhamba ngokukhawuleza" yayingagcinwa yiVedder owe phantsi kwamaxesha amaninzi kwimiboniso yebhendi.
Jonga udidi u-Eddie Vedder uhamba kwaye uwele esiteji kuqala kuMilan wehla apha.
I-Nirvana's Krist Novoselic ewa emva kokubethelwa yi-MTV Awards (1992)
Nirvana. Kevin Mazur-Getty Izithombe
Ekupheleni kokusebenza kweNirvana ye "Lithium" kuma-MTV Music Award, ngo-1992, i-bassist uKrist Novoselic iphosa i-bassist yakhe emoyeni kuphela ukuba ikhwebe ikhanda entloko. I-novoselic iphakama iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ikhubeke.
Jonga i-Nirvana's Krist Novoselic ukuwa emva kokubetha entloko kunye nezakhe zangasese apha.
UBryan Adams udibana nomculi aze awele kwiLiverpool, kwi-UK show (2015)
Bryan Adams. UDonald Weber-Getty Izithombe
Ngethuba lokusebenza kukaBryan Adams kwingoma ethi "Ihlobo lonyaka ka -69" kwi-Liverpool ka-2015, i-Adams kunye nomculi wexesha elide uChrist Scott baphumelelana njengokuba badlala umdlalo wenkukhu. Umculi akazange abuyele phantsi okwenze ukuba i-Adams ibanjwe kwi-stage. Emva kokuba i-Adams 'yekile ukuhleka yaxelela abaphulaphuli ukuba bekuyixesha lokuqala elalikhutshwe ngumculi wakhe kwi-career yakhe engama-30 +.
Jonga u-Brian Adams udibene kunye nomculi wekhotha uK Keith Scott apha.
Izibhamu N 'Roses I-Axl Rose iwela kwi-show yaseColombia (2010)
Axl Rose. Ethan Miller-Getty Izithombe
Ngethuba ekwenzeni isembozo sikaBob Dylan esithi "Ukuqhayisa kwiNdlu yaseZulwini" eBotota, umculi waseColombia Guns N 'Roses uhamba ngapha kwesiteji aze awele phantsi. I-Axl ihleli ngomzuzwana ngobumnandi obukhulu ebusweni bakhe, ngoko uyasukuma aze aqhube ingoma ngaphandle kokulahleka intsimbi.
Jonga i-Axl Rose slip uze uwele kwi-1:17 mark apha.
U-Matthew Bellamy u-Muse uhamba kwaye awele kwisiteji kuMthendeleko wokuLanda (2015)
Muse. Stuart C. Wilson-Getty Izithombe
Ngethuba lokuvula ingoma ethi "Psycho" eMnyangweni we-Download Download we-2015 e-Donington Park eLeicestershire, ummeli waseNgilandi uMatewu Bellamy wehla waza wawa. UBellamy waqhubela phambili ingoma emva kwesigxina sakhe esifushane.
Jonga uMatthew Bellamy kwaye uwele apha.
10 iClassic "School Out" Iingoma
I-Shampoo eDakazayo isebenza njani
IiFilimu zeMfazwe eziPhambili kwixesha lonke
IsiLwimi sesiLatin sesi-3 soCujugation Paradigm
Imfazwe YaseMerika: I-General PGT Beauregard
Funda indlela yokucoca ityala leeyilethi